Dheeranka Boosteeyaha Boosteeyaha, Dharka Labalaad ee Dharka, Plain Poplin - Ruimian
65% Polyester 35% Weel Weyn
80% Polyester 20% Weelka Dahabka ah
90% Polyester 10% Weelka Weelka
Xidho Dharka Dharka Dabada ah
Waxaan u habeyn karnaa cabir kala duwan oo dharka gaduudka ah, dhar garka, midabaynta iyo xaashiyaha daabacan ee loo isticmaali karo jeebka, dahaarka, shaatiga, dharka, kabaha, koofiyadaha, boorsooyinka iyo dharka guriga, fidsan. Waxaan sidoo kale ku dhammeyn karnaa dharkan annagoo geyney (maqaarka miro guduud). Biyo-caddeyn, dib-u-ruxid, olol-u-dhaliye, u adkaysashada kareemada, hoos-u-caddayn.
Si loo horumariyo hal-abuurnimada iyo ganacsi-abuurka joogtada ah sida xoogga kicinta, in la sameeyo ganacsi weyn oo xoog leh, hawlgal raasamaal, maareyn fara badan iyo xoojinta xoogga sida xariiqda ugu weyn, oo leh dhaqaale kaarboon yar yar, ilaalinta deegaanka cagaaran iyo kobcinta qaab-dhismeedka sida hagida, samee dhar adag. daabacaadda iyo dheehista warshadaha ugu weyn.
Ruimian waxay leedahay qalab wax soo saar horumarsan oo gudaha ah iyo xitaa caalami ah; badeecada inteeda badan waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Jabaan, Galbeedka Yurub, Kuuriyada Koonfureed, Australia, Hong Kong, Turkey iyo wadamo kale iyo gobolada.
T / C 65/35 dhar jilicsan oo jilicsan
Dhar wanaagsan oo suufka pollenster ah oo tayo wanaagsan leh
20% suufka 80% dharka xareyska polyester
10% suuf 90% dharka polyester ah
35% suuf 65% dharka polyester Cisbitaalka
Hebei Ruimian Co., Ltd. waa soo saare khaas ah oo dhoofisa dharka. Waxaan u habeyn karnaa cabir kala duwan oo dharka gaduudka ah, dhar garka, midabaynta iyo xaashiyaha daabacan ee loo isticmaali karo jeebka, dahaarka, shaatiga, dharka, kabaha, koofiyadaha, boorsooyinka iyo dharka guriga, fidsan. Waxaan sidoo kale ku dhammeyn karnaa dharkan annagoo geyney (maqaarka miro guduud). Biyo-caddeyn, dib-u-ruxid, olol-u-dhaliye, u adkaysashada kareemada, hoos-u-caddayn.
35% suuf 65% dharka poliste-ka ka sameysan
35% suuf 65% dharka wax lagu dhejiyo ee polyester, combed ...
20% suuf 80% dhar-gashiga polyester, combed ...
Hebei Ruimian Dharka Ganacsiga Co., Ltd
Fakis: 0086- (0) 311-67501546
waa maxay Twill dhar?
Xarkaha iyo weft-ka yar-yar-yar ayaa isku dheggan uguyaraan ugu yaraan hal mar, oo xarkaha warqadaha iyo weftooyinka is-weydaarsiga ayaa lagu daraa si loo beddelo qaab-dhismeedka oo waxaa looggu yeeraa laba-labbo go '. Qaab dhismeedka maroku waa laba ...
Dharka Wejiga ee Caafimaadka
Waxa ku jira 2 lakab oo ku jira shaydan caafimaad ee TPU. Midka koowaad waa dhar asaasi ah. Waa dhar aan tol lahayn. Lakabka hoose waa filimka TPU. Waxay ka dhigeysaa dharka inuu noqdo hawo hawo iyo biyuhu. Qolka jilicsan ee jilicsan ee TPU ...
Bishii Abriil 10-keedii, shirkaddeenna waxay u tagtay Vietnam si ay uga qeybgasho bandhigga, oo muujinaya alaabada shirkadeena ugu weyn: dharka jeebka, Dharka Caafimaadka, dharka dharka, waxayna macaamiisha siisay soo bandhigid faahfaahsan oo ku saabsan kooxda ...